Izmailovo Island, eMoscow: hambo. Ithempeli, emnyuziyamu esiqhingini Izmailovo. Indlela ukuya Izmailovsky Island?
Moscow - idolobha sobuso eziningi. Eceleni ezitaladini ephapheme yesimanje yizindawo cishe angathintwanga impucuko yesimanje. Bona walondoloza umoya bezikhathi zasendulo, futhi lasendulo esikhumbuzo yezakhiwo, kokubona ezahlukene - zobuqhawe sad - emakhasini umlando isimo Russian. Enye yalezi zindawo ngokuqinisekile Izmailovsky isiqhingi, nasemhlabeni kukhona ngenxa Tsar Alexei Mikhailovich, wethiwa ezithule.
Uyena owayengumbusi we kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, kodwa ubunjalo ekhethekile uthuli akazange ihluke, ngoba, mhlawumbe, hhayi odumile kakhulu. Izmaylovo umhlaba ingeyamakhosi Romanov lwamakhosi, futhi phakathi nekhulu lesikhombisa, inkosi wanquma ukwakha indlu Manor, owawenziwa.
Ukuze uqale ngokwakha amadamu amaningi oxhumene Igilebhisi Isiliva namachibi. Kuyinto, eqinisweni, futhi kuye kwavula Izmailovsky siqhingi, esingamakhilomitha ukudalwa umsebenzi wezandla zomuntu. Ngemva kokuthi i-ikhambi elinjalo yobungoti yazo inkinga ukuzivikela waqala ukwakhiwa ifa, okwaphela kuphela 1690.
yokuhlala EnguMbusi sika
On endaweni ebiyelwe elise egcekeni EnguMbusi sika, a ngokhuni umbhoshongo-esigodlweni, itshe Pokrovsky Cathedral, eyakhelwe indawo ye agugile isonto ngamapulangwe, ngakho la Ibhuloho Tower. Yaphela ngokukhululwa imitha-engamakhulu ibhuloho, exhumanisa kuya ensimini Izmailovsky Isiqhingi angena zonke izivakashi. Budebuduze lombhishobhi yamisa isonto isikhulu Ioasafa. Kuze kube manje, ngeshwa, ayizange walondoloza, izisulu abasebenzi wamavukelambuso-nomqondo ngemva kwezenzakalo elibi 1917. Bona kahle ezilimele Cathedral Izmailovo Basil sika - isakhiwo omangalisayo ngasekupheleni kwekhulu leminyaka nesikhombisa.
Yakhiwa ku model of the Kremlin sika Assumption Cathedral futhi ngokucebile kakhulu ehlotshisiwe: tile ezincane nezinkulu phezu mbumbulu ukunikeza ekwakheni ukubukeka ngokubabazekayo nenhle ngesikhathi esifanayo. Kwethulwa lapha kanye nalokho okubizwa ngokuthi peacock - iphethini, kusungulwe Russian master Polubes. Dome egolide, amnyama, zibe maholoholo. Batinikela lombhishobhi sokuqala, ukubukeka esiyingqayizivele.
I umhlobiso sangaphakathi ithempeli seliphelile ngempela nesizotha. Okuwukuphela le iconostasis, adalwe amakhosi engcono ezivela ezifundazweni ezahlukene Russia.
Belfry ethempelini eyinhloko esiqhingini isikhathi abanye ababekhonza injengombhoshongo ibhuloho. Kuyinto ngezinga elithile ngokuvumelana lombhishobhi: futhi ehlotshiswe amathayili namakholomu.
Okulandelayo Petra Velikogo
Njengoba yokuhlala yamanzi wageza phezu besuka eNgilandi wanikeza isikebhe ekhethekile encane, okwenzeka endabeni isidingo ezihlukahlukene amagagasi abajikelezayo.
Lokhu umkhumbi bathole abasha uPetru mina kwi izigodi ibhizinisi amagceke ke bayabukana sengathi bafuna ukuhleka umphakathi wendawo, begijima phezu kwayo Isiliva-Amagilebhisi pound, ngezikhathi ukuhlela "izimpi zasolwandle".
Ngemva kwesikhathi eside, umbusi omkhulu call lokhuni umhlanganyeli "Umkhulu we Russian imikhumbi" umkhakha ubungqabavu bobusha bakhe, kanye Izmailovo Island - "imbeleko" zalo.
Manje IsiZulu ngesikebhe esincane (noma kunalokho, ukuthi besishiyile) wabonisa ngosuku wokuvula, itholakala eziseduze - ngakolunye uhlangothi ichibi Isiliva Igilebhisi. Khona muva ngaphezulu (2007) wakha okubizwa ngokuthi Izmailovo ezibiyele, baveze izakhiwo lokhuni Russian lasendulo. On the izakhiwo ezimibalabala, okuhloswe ikakhulukazi izivakashi, isiqhingi inikeza umbono omuhle. Seduze Chic ultra-yanamuhla ehhotela eziyinkimbinkimbi "Izmailovo": eduze nezakhiwo zasendulo kwekhulu nesikhombisa, kubukeka sengathi isivakashi kusukela esikhathini esizayo.
igceke EnguMbusi esasikuyo manje nayo yayibiyelwe izakhiwo eziningi umuzwa kwezomnotho kanye ezintsha: u-Alexis, ngokusobala, kwaba umsekeli enkulu yenqubekela phambili. I zokugcina phezu Insimu Izmailovsky esiqhingini esekhulile Outlandish ngesikhathi izithelo nemifino (ikakhulukazi wahlanganyela ezingezwakali amasiko eningizimu), wasebenza workshop ye ababazi eziningi.
Ngokwakhe Russian Tsar, siqhuba emzini wakhe ehlobo, whiled kude isikhathi ezizingela amahlathi azungezile yebo anqume isiphetho isimo. Ngezinye izikhathi imibhoshongo ibhuloho zasendlini kwakuba nemihlangano we "ephalamende" kwekhulu lesikhombisa - the Boyar Duma (hhayi mbhoshongo omkhulu abahlanganyeli behlaliswe kalula).
Monuments of izakhiwo zasendulo
Namuhla, lesi sakhiwo - omunye osele ambalwa. Ngaphandle umbhoshongo yayisivele okukhulunywa Cathedral St Basil sika (namanje ezisebenza ethempelini Izmailovo Island), egcekeni EnguMbusi ngisho eMpumalanga naseNtshonalanga Gate (obizwa nangokuthi nangemuva). Aqhubeka ngempela evumelekile kuze kube yilolu suku. Nokho, ezingemuva ngokuvamile sihlale ivaliwe.
Amasampula asele bokwakha asendulo aqala ngaphansi ukuhlaselwa isikhathi, akanazwela futhi ibutho French: ifa, wayazi kahle aphanga futhi abhidlizwa ngesikhathi sempi ye 1812.
Kuphela namathathu banesifo esibi ngasekupheleni, uMbusi uNicholas nganquma ukuthi endaweni engcwele akumelwe ingabi nalutho. Ngokusho komyalo wakhe kusayithi esefiké yokuhlala labhidlika eyakhelwe almshouses lempi. Kulokhu, izakhiwo ezimbili ezakhiwa eduze Pokrovsky Cathedral, okubangela ukubukeka izakhiwo wahlupheka kakhulu: ukuze bahlabele ezimbili lokufakwako ezintathu nenhle futhi ukuphuca injabulo abahambi okufakaza ethempelini bevela kuzo zonke izinhlangothi.
Nokho, ukugxeka abanye abaklami bezakhiwo Ton futhi Autograph akudingekile olunqunyelwe umuzwa tebuciko: i uyasinda isonto kuphela Izmailovo siqhingi ngaleso sikhathi wabanika ibhange wasabisa ugoqe. A isakhiwo esisha nje okuphiniwe wakhe nhlangothi zombili, usekhonza njengomshumayeli wesikhathi ukwesekwa.
Ngemva Revolution kuka-1917, unyaka yaphenduka poorhouse ohlanganyelwe: kwakukhona emzaneni ukusebenza, wabiza leli dolobhana iqanjwe Bauman. Abanye "lucky" waphila lapha ngasekupheleni kwekhulu XX. Khona-ke zamphambilini Izmailovsky esiqhingini uncome, futhi manje yena uyilungiselelo ilungu inkumbulo iyadlaleka segama kwawomuntu wenyama (esifushanisiwe - MGOMZ).
On the indawo akukho izindawo zokuzijabulisa, kwenqatshelwe epikinikini. Mhlawumbe yingakho ethandwa kakhulu ekubeni kwepaki endaweni: kukhona konke lokhu, ngisho ngokweqile.
A endaweni ethule endaweni eMoscow ezinomsindo
Kulabo abakhetha iholidi ezahlukene, ephelele Izmailovsky isiqhingi. Kanjani ukuze uthole kule ndawo kuthulile, elinokuthula futhi elihle kakhulu? Esiteshini esiseduze metro - "Yabashokobezi." Isisiza umsebenzi yokuthi kumnandi ukuba aphume ke kukhona eyodwa kuphela indlela yokuphuma, ngakho azulazule emihumeni akudingeki.
Ukuhamba ngebhayisikili emgwaqweni omkhulu omatasa Izmailovskii (uhhafu esiphezulu ihora), lezi zihambi namuhla bazithola omunye amabhuloho ezintathu yokuxhuma siqhingi oya ezwekazini, - ukufinyelela. Yena imoto, kodwa balindele ukuba ukukhwela enkantolo Tsar e-gig sakhe akusona: entry uvunyelwe inkonzo izimoto kuphela, ngakho ukufika ngemoto izakhamuzi kuyodingeka ukushiya imoto endaweni epaka izimoto.
Ngisho eduze esitimeleni - a banana lezinyawo yezinyawo kuholela ke, lapho ungakwazi ukuvala endleleni esiholela Izmailovo Kremlin.
Along azungezwe we isiqhingi ozungezayo i-track asphalt, ukuze ukwazi Ukuncoma ubuhle ezizungezile ngo yimuphi sezulu. Enhloko-dolobha, asivamile ukubonwa endaweni njengoba esithekile futhi elingenabo abantu abaningi njengoba Izmailovsky isiqhingi. Moscow, ebhongayo naseduze, sengathi basuka kuye, kokushiya isikhala ukuphumula Ezimisele. Ogwini igcwele nezihlahla egcwele abadobi elinde ukuluma, ezindleleni kanye ezivulekile azulazule romantic imibhangqwana ngisho Muscovites nge thokoza izindawo eziseduze.
Museums and Imibukiso Izmailovsky isiqhingi
Phakathi naleso sikhathi, iRussia uzama ukuthuthukisa ngokuya ezokuvakasha. Ngenhlanhla, ayikho into okuthiwa ihlukile, futhi Izmailovsky esiqhingini hambo, indawo kanye indaba ephathwayo, ayatholakala manje isifuna ukwazi okwengeziwe ngomlando ezweni lakubo. Intengo wabo ngempela yeningi, futhi amaqiniso athakazelisayo, tinganekwane izindaba Umenyiwe ukunakwa amaningi.
Egcekeni, sizungezwe izakhiwo almshouses wangaphambili, kwamasango amabili kanye Cathedral, ukuhambahamba limnandi. I wakudala Linden izihlahla ukuvikela ilanga elishisa bhé, futhi izindonga ubudala amunca msindo wokuxokozela emzini omkhulu cishe ngokuphelele. Igceke oluhlaza futhi ubeke izinto ngononina futhi icocekile: i flowerbeds - izimbali aluhlaza, ithrekhi ehlanzekile izoshanelwa.
izakhiwo Iningi zitholakala emahhovisi Museum abasebenzi restorers lapho iziphathimandla zesonto wabaxosha le Novodevichy Sezindela, ukukhethwa kanye ikakhulukazi wayengekho. Manje zama ukuletha isakhiwo ku kuhambisana indawo entsha okuyiwa kuyo. Lapha kukhona amancane kunalokho abampofu Manor Museum. Izmailovo esiqhingini (okungenani okwamanje) uqhosha inombolo encane izinto. Amafa eziyinhloko esikhumbuzo yezakhiwo kwekhulu nesikhombisa, lapho ngezikhathi ezithile kukhona nemibukiso ezithakazelisayo. On the poster ayatholakala usuku elula futhi indawo Museum. Isiqhingi elangazelelwa izivakashi zayo.
Museum of Local Lore iNdunduma: Ikheli embukisweni. Barrow ezikhangayo
Mangyshlak - enhlonhlweni e Kazakhstan. Incazelo nesithombe
Streets Petersburg. Far East avenue
Federal District - mbukwane. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona emzini Karachay-Cherkessia
Ihhotela "Fereniki", eKrethe - isiqinisekiso high ukuphumula!
Ngubani Dzheyms Potter. Umlando uhlamvu
Oleg Karnaukh: Biography, ukubuyekezwa imisebenzi yayo ibhizinisi
Ibhande le-Tourmaline. Umphumela wokwelapha emzimbeni
Ikhalori okuphansi yenkomo abilisiwe - kukho okuhle ngokuba ekudleni
Izilwane ezifuywayo zezingane - kungakhathaliseki ukuthi ziqala isilwane